UPDATE: Al-Shabaab oo ku sii siqaya magaalada Guriceel & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
UPDATE: Al-Shabaab oo ku sii siqaya magaalada Guriceel & Wararkii ugu dambeeyay
Guriceel (Halqaran.com) – Maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa gaaray deegaano hoos-tagga Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, maalin uun ka dib markii ay la wareegeen Ciidamada Dowladda Somaliya.
Ciidamada Dowladda oo ka yimid dhinaca Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa Axadii bilaa dagaal kula wareegay Magaalada Guriceel, saacado yar uun ka dib markii ay isaga baxeen Xoogaga Ahlu Sunada Gobolada Dhexe.
Maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa xalay lagu arkay Deegaanada Waradhuumale iyo Dhagaxyaale ee duleedka Magaalada Guriceel. Tani ayaa timid markii ay deegaanadaasi baneeyeen Xoogaga Ahlu Sunna.
Ilaa iyo hadda ma cadda in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku wajahan yihiin Magaalada Guriceel iyo in kale.
Ahlu Sunada Galmudug oo khilaaf toddobaadyadii la soo dhaafay soo jiitamaayay kala dhaxeeya Dowladda Federaalka Somaliya ayaa waxaa Axadii gacanteeda ka baxay Magaalooyinka Guriceel iyo Matabaan. Ciidamada Dowladda ayaana bilaa dagaal kula wareegay magaalooyinkaasi.
Ahlu Sunada Galmudug ayaa ahayd awood muuqato oo qaybo ka mid ah Gobolada Dhexe ka caabineysay Shabaabka hubeysan ee dagaalka kula jira Ciidamada Dowladda iyo Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Si kastaba, maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa laga cabsi qabaa in ay ka faa’iideystaan khilaafka xilligan Ahlu Sunada Gobolada Dhexe kala dhaxeeya Dowladda Federaalka.
ku sii dhawaatay